Uyenza njani isalathiso esizenzekelayo ngeMicrosoft Word -Geofumadas
NgoJuni, 2011 Internet kunye neBlogs
IMicrosoft Word ihlala yenye yeenkqubo esifunde ukuzisebenzisa ngaphandle kokuthatha ikhosi. Ukwenza nqakraza y ukungena Siye saqonda ukuba kuncedo ukwenza amaxwebhu, ukuba aneetafile, ukuba iithebula zenza uququzelelo njenge-Excel kwaye zinezinye izinto ezongezelelweyo kwisikrini esibhakabhaka seLizwi eligqibeleleyo.
Le khange ibe yenye yezihloko zam, ngaphandle kwemicimbi emincinci eya kwiTag Office for ebulalayo, ukwazi ukuba ungabonisana nani xa sifuna ukubenza okanye imemori isiphumelele.
Rhoqo, amaxwebhu esisebenza kuwo, kwiphepha labo lesibini, anetafile yemixholo. Amaxwebhu amafutshane, akuyomfuneko ukwenza umhlaba ube nzima, kodwa ukuba senza umsebenzi wamaphepha amaninzi, ngokuqinisekileyo kufuneka sifunde olu hlobo lweempawu zeMicrosoft Word. Ndiyavuma ukuba bendiyoyika okwam okwethutyana, ndide ndiyicacisele omnye wamagcisa am kwaye ndiye ndabona ukuba yenziwa kuphela ngamanyathelo amathathu alula ayenzayo.
1.Sebenza ngezimbo zokubhaliweyo
Kukho ezinye iindlela zokwenza oku, kodwa ndikhetha ukuyenza ngestayile, kuba oku kusebenza nokusebenza izicatshulwa ngendlela efanayo; khetha i-tab ephezulu "Uyilo" ukubona icandelo lezitayile ezichazwe kwangaphambili.
Ukubonisa iphaneli emva kwexesha kwenziwa kwinqanaba eliphantsi lecandelo, njengoko kuboniswe kumfanekiso.
Xa sithemba ukudala isitayela esitsha, eyona nto iyona ndlela yenziwa ngayo ngokulinganisa AutoCAD. Senza isicatshulwa kunye nefonti, umbala, i-induction kunye nezinye iimpawu zokunambitha, emva koko sicofa ekunene kwimouse kwaye siyigcine ngesitayile njengesitayile esitsha. Kufanelekile ukubona iitemplate eziza neOfisi, ezinye zinencasa elungileyo, ukuze ungaqali kwasekuqaleni, emva koko ukwipaneli enye ungayiguqula.
Ke xa wabela isitayile kumhlathi sikwenza ngonqakrazo. Ngoncedo lokuba ukutshintsha isitayile kuguqula nasiphi na isicatshulwa, ngaphandle kokwenza umhlathi ngomhlathi. Ngale ndlela unokwenza iindidi ezahlukeneyo zezihloko, imibhalo engezantsi, isicatshulwa sokugcwalisa, isicatshulwa semifanekiso, ngamafutshane, naziphi na izimvo ezinika uxwebhu incasa efanayo.
2. Yenza isalathiso
Ithebhu isebenze "Iingxelo", Siqhosha kwindawo esihlala kuyo ukuba isalathisi somxholo sifakwa, ngoko sikhetha Uluhlu lwangaphakathi size sikhethe "Faka itheyibhile yomxholo... "njengoko kuboniswe kumfanekiso.
Ngenxa yoko, iphaneli ibonakala apho kuboniswa khona ezinye izimbo. Kukhetho "Shintsha... "sanyula igama lezitaelo esithemba kuzo ziya kwikhompyuthela kunye nokuphambili. kwaye ngale nto senza i-index index kunye namaxhumela kwiphepha elichaphazelekayo.
Ukuba sifuna ukutshintsha isitala sale nto, iguqulwa kwiqhosha "Khetha… ”Ndicebisa ukuba singangxami de siziqhelanise nezinto ezilula zenkqubo.
3. Hlaziya isalathiso
Ukuba senza uhlengahlengiso kuxwebhu, sicofa ekunene kwisalathiso kwaye sikhethe ukuhlaziya iinkalo. Ayinamsebenzi ukuba sicime izahluko okanye sitshintshe amanani, yonke into iya kuhlaziywa ngokuzenzekelayo.
Sekule ncwadana am ochwephesha angaba nesizathu sokwenza iingxelo ngesitayela somsebenzi omhle abenzayo kwintsimi.
... igrama, iprosody, kubhala, esolule imifanekiso kunye nokuhambelana ... asisombululi ngeLizwi.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Sitchmaps / Global Mapper, guqula imifanekiso ibe yi-ecw okanye i-kmz
Post Next Iimephu zeGPS zaseVenezuela, ePeru, eColombia naseCentral AmericaOkulandelayo »
I-5 iphendula "Uyenza njani isalathiso esizenzekelayo ngeMicrosoft Word"
Inyaniso andizange ndiyifumane nantoni na apha ayifuni impendulo engayifunayo
Inyaniso kukuba kukho ezininzi izinto ezintle onokuzenza ngeGoogle
Oku kundincede kuphela ukuba ndibone ukungahambi kakuhle kweendlela zokucinga ezingekho ngqiqweni ezingafikeleliyo nangayiphi na indlela okanye elungileyo….
Jaime Méndez uthi:
Oko akuyenzi isalathiso, kwenza itafile yemixholo ... isalathiso sinika indawo yamagama athile kunye neenkcazo kuxwebhu ... (Isalathiso esihle, kodwa kwitafile yemixholo):
Ndandilibale elinye inyathelo lokugqibela ngoko ndenza ngeenyawo, ndiyabonga